ထူးခြားသောအုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်7သိကောင်းစရာများ | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားခြင်း ZOE
ထူးကဲသောအုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့7သိကောင်းစရာများ
Zoe ကို Talent: ဖြေရှင်းချက်
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် Zoe ကို Talent: ဖြေရှင်းချက်များကဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများအတွက်ရေးသားခဲ့
ထူးကဲသောအုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့7သိကောင်းစရာများ Zoe ကို Talent: ဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သငျသညျတိုးမြှင့်ရှာနေခဲ့လျှင်တစ်ခုထုတ်စစ်ဆေး အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်းများ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နှင့် ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့် အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်။ ဒါဟာသင်ကလုပျနိုငျကိုဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်:
1 ။ သင်၏အဆက်ပြတ်သောနေရာများခွဲခြားသတ်မှတ်
ရန်သူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးက၎င်းတို့၏ခြိမ်းခြောက်မှုအလားအလာ သိ. ဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့ရှာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ကိုဆိုလို သင့်ရဲ့အလုပ်စိုးရိမ်သောအရာကိုအတွက်အချက်များ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု။ ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချို့ယွင်းချက်အလုပ်လုပ်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများရှာဖွေတာ အမြဲတမ်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်။
ဒီအတှကျအကြီးအ tool ကိုယေဘုယျအားဖြင့် Self-အသိပညာတစ်ခုစီးရီးပါဝင်ပါသည်သောစကားပြော, Self-တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, နှစ်ဦးစလုံးကိုမေးခွန်းများကိုသင့်ရဲ့ရလဒ်တွေအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့် သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဟန့်တားသောအမူအရာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။ သူတို့ကိုသင်ဖြေရှင်းရန်တသမတ်တည်းလုပ်ရပ်များတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှိရာကဒီ Self-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုပိုကောင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ပါဝါဖြစ်ကြပြီးဆက်ဆက်အခြားသူများထံမှဆိတ်ကွယ်ရာကိုသင်သတ်မှတ်ထားကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်တစ်ခုအကွာအဝေးပိုင်တော်မူ၏။ ငါသည်သင်တို့၏အားသာချက်များ, ထွက်ရပ်သောသူတို့ကိုအရညျအသှေးနဲ့ရှုထောင့်အကြောင်းပြောနေတာငါ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လည်းသင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်များကိုအတွက်။ ဒါကြောင့်, သင်ပြီးသား, ဤတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြ ?. သငျသညျအလှနျကောငျးများမှာဘယ်မှာသိလား ?. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဒါမှမဟုတ်ထဲမှာ, နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်၌ရှိကြ၏ ဆက်သွယ်ရေးဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်ါဆက်ဆံရေးဟာအလုပ်အကိုင်အတွက်.
သငျသညျထူးခြားဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့် core ကိုအရည်အသွေးနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်အဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာဘယ်မှာထွက်ရှာပါ။ ကုမ္ပဏီ၌သင်တို့၏အခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ကို ယူ. လျှောက်ထား ဖလှယ်ခြင်းနှင့်စုပြုံအတွေ့အကြုံများနှင့်အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့ Know-ဘယ်လောက်တိုးတက်စေရန်သင့်ရဲ့အသိပညာ။
ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်ကုမ္ပဏီများပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာ, သင်သည်အဘယ်သို့ငါးခုသို့မဟုတ်တစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသင်ယူခဲ့ကြပြီးသားယနေ့ပေါရာဏများနှင့်ခေတ်မမီတော့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, လေ့ကျင့်ရေး, အုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု, ဖတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, အသိပညာနှင့် ကွန်ယက် ဤအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ, ငွေနှင့်အချိန်အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လည်းသင့်ရဲ့အလုပ်နှင့်သင့်စီးပွားရေးနှင့်ကမ္ဘာကြီးအမြင်စပ်လျဉ်း၌သင်တို့၏စိတ်ဓာတ်ချဲ့ထွင်ရန်သင့်ကိုကူညီနိုင်အောင်တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံပေါ်မှာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
တစ်ဦးကောင်း Interpersonal ဆက်ဆံရေး 4.Build
ကျွန်မဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဤသည် တိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖို့မရှိမဖြစ်လူ့ကျွမ်းကျင်မှုအတွင်း ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သို့မဟုတ်အခြားဧရိယာ၌ဖြစ်စေ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူ၏အလုပ်ကိုအခြားသူများနှင့်အတူအနည်းဆုံးအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်လျှင်ပင်အဘို့, သူ့အပြန်အလှန်၏အရည်အသွေးဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝအပေါငျးတို့သခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
အကျိုးဆက်ကြောင့်သင်ကလူအကြောင်းကိုကန့်သတ်ယုံကြည်ချက်ကျော်လွှားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသင်၏အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မယုံကြည်မှု, တရားရှိဖို့စာတွေအစားရိုင်းစိုင်းတဲ့နှင့်အတင်းအဖျင်းအဖြစ်အားဖျက်ဆီးခြင်းများနှင့်အပျက်သဘောအပြုအမူတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ရှာသောအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ interaction ကဆောက်လုပ်ဖို့အတှကျဤမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, ထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, ဖောက်သည်များနှင့်ခေါင်းဆောင်များမှဆက်စပ်ဖို့နဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းနှင့်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဒီသဘောနဲ့,0ထံမှ 10 မှအဘယျအတနျး သငျသညျယနေ့အလုပ်ကိုမှာသင့်ရဲ့ interaction က၏အရည်အသွေးအားပေးရပါသလဲ။ သင်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသင့်တယ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာစဉ်းစား, သင့်လူ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်; သင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များသို့မဟုတ်အနီးကပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များထံမှတုံ့ပြန်ချက်တောင်းနှင့်အစဉ်အမြဲကြိုးစားကြသည် ဒီဧရိယာထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်.
သငျသညျဝေးမြင်မည်သူမျှမရှုမြင်သောအရာကိုကြည့်ဖို့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါအခွင့်အလမ်းအများဆုံးအောင်နှင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာခြိမ်းခြောက်မှုများဖျက်သိမ်းရေးသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဝေး သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါအတွက်, သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရူပါရုံကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, ဒီ, သင်သည်ကုမ္ပဏီ, စျေးကွက်နှင့်လူမျိုး၏သင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုထပ်တိုးစမတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေခြင်းနှင့်စည်းလုံးပြုမူစေသည်တစ်ခုအရည်အချင်းကိုကြောင့်။
ဒီသည်ရန်အရေးကြီးပါသည် အဆက်အသွယ်အမြဲဖြစ် သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူ။ ဒီတော့ဥပမာ, သတင်းများ, စျေးကွက်နှင့်လူမှုရေး, စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေး, နည်းပညာနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများမှစေ့စေ့နားထောင်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင့်ရဲ့အသိပညာကိုထပ်တိုးရန်ကူညီပေးသည်နှင့် သင့်ရဲ့အလုပ်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီအသစ်အမြင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရောက်စေ.
ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးရှိခြင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များ၏အောင်မြင်မှုကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင် လည်းရှိသမျှသည်အခြားသောဒေသများ၏။ ကမျြးစာလာ Be အဖြစ်နှုတ်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ထင်ရှား။ ဒါကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဘက်မှာကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့လမ်းကိုငါတို့လူ့ကျွန်တော်ထင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရေး, ခံစားရနှင့်လုပ်ရပ်, ကြှနျုပျတို့ယခုအချိန်အထိ get ရလဒ်များအကြောင်းအများကြီးပြောပြတယ်။
အလုပ်များကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပိုကောင်း, ဆက်သွယ်ရေးထို့ကြောင့်ထွန်းလင်းနှင့်ပိုပြီးစုံစုံ; တုံ့ပြန်ချက်, client နှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူညှိနှိုင်းဖြစ်စဉ်ကို; အတူတူနေတဲ့စီမံကိန်းကိုလုပ်နေသည့်အချိန်တွင်အသင်းနှင့်အတူနားလည်မှု, အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းနှင့် Co-လုပ်သားများနှင့်အတူအသိပညာ, သတင်းအချက်အလက်ကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်များနှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်လူ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှတဆင့်ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
So သငျသညျပိုကောင်းဆက်သွယ်ဖို့ရှာလျှင် နှင့်ဆိုထားပါသည်အတူသင်အသုံးပြုစကားတို့ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ; အသံသင့်ရဲ့လေသံတစ်စုံတစ်ဦးကိုရည်ညွှန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့ဘာသာရပ်အကြောင်းပြောနေတာနှင့်ဤကိုယ်ဟန်အနေအထားကူညီပေးနေသို့မဟုတ်နားလည်သဘောပေါက်ဘာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ။ သို့ဆိုလျှင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ထက်မြက်သင့်ရဲ့လူ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သင့်သုံးစွဲဖို့ရှာအံ့သောငှါ ဆက်သွယ်ရေး ပိုပြီးအသိဥာဏ်။
7.Become တစ်နည်းပြများနှင့်သင့်ရလဒ်များ Boost
နည်းပြသောကွောငျ့သငျသညျနေစဉ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလားအလာများနှင့်လူသားဆန်စွာဝန်ခံတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကိုထောကျပံ့ သို့မဟုတ်ပင်သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ, သင်ကိုလည်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူကြီးထွားခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးနည်းပြလည်းသင်ကဲ့သို့အခြားသူများ၏ရလဒ်များကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့်ရန်လေ့လာသင်ယူဖို့အပြင် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုမြှင့်တင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
ဒီသဘောနဲ့, တစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ် , သူ့လူ့ကြားဆက်ဆံရေး, သူ့ဆက်သွယ်ရေး, သူ့တုံ့ပြန်ချက်တိုးတက်ရန်, ကုမ္ပဏီ၌သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အချိန်စည်းရုံးနှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းတဲ့နည်းပြသင်တန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသုံးနိုင်သည်အဖြစ်ကသူ့ကျွမ်းကျင်မှုခေါင်းဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်, လူမှုစိတ်ခံစားမှု နှင့်မဟာဗျူဟာ.
ဤတွင်နှစ်ဦးကိုလမ်းခရီးနေသောခေါင်းစဉ်: ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုယူပြီး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ကာပြည်တွင်းရေးနည်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်နှင့် သင်၏ကုမ္ပဏီသို့နည်းပြ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်က၏အစိတ်အပိုင်းနေသောန်ထမ်း။ အခြားနည်းပြ၏အသိပညာမှစီမံခန့်ခွဲမှု၏သင့်အသိပညာထည့်သွင်းဖို့နှင့်ဤအတွက်ပညာရှင်ပီသစွာပြုမူဖို့ဖြစ်ပါတယ် ရာထူး၎င်းတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ထိရောက်သောနှင့်အရှိန်မြှအတွက်ကူညီခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, ခေါင်းဆောင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ရည်မှန်းချက်များ၏လက်လှမ်းမမီ.
ကစီမံခန့်ခွဲသူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်မွမ်းမံဖို့ဖြစ်နိုင်ပုံကိုကြည့်ပါ ?. ငါမူကားအထက်ဤအကြံပြုချက်များမျှော်လင့်ပါတယ် သင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်တိုးချဲ့ကူညီ သင့်ရဲ့အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအချက်များအလုပ်လုပ်နှင့်သင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, လူ့မူတည်ပြီးနိုငျကွောငျးတစျခုနှင့်အယူအဆရေးရာအခွက်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမှတဆင့် သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်, နည်းပြသင့်ရဲ့ထူးကဲသောရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အားကူညီပံ့ပိုးရန်ဒီနေရာကိုကြောင်းကိုသတိရပါ။
Zoe ကို Talent: Solutions - လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဘဝ
Zoe ကိုအသက်အဘို့ဂရိစကားလုံးကနေယူ, ဤ clients များတစ်ပွညျ့စုံစဘဝရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့ Zoe Talent: Solutions '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်မှလာခြင်းဖြစ်သည်။ 40 ကျော်အတိုင်ပင်ခံနှင့် 20 ဘာသာစကားများထက်ပိုမိုနှင့်အတူ, Zoe လေးနိုင်ငံများရှိရုံးခန်းများရှိပြီးကမ္ဘာအနှံ့ဖောက်သည်သင်တန်းများပေးပါပြီ ပုဂ္ဂလိက, အများပြည်သူ-ပုဂ္ဂလိကနှင့်လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင်။ Zoe မှာအသင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ clients များသင့်လျော်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလက်ျာအဖွဲ့သည်လက်ခံရရှိနိုင်သောသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်နှင့် ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှု။
အပြည့်အဝတိုင်းကို client ရဲ့အခြေအနေတွင်, ပြောင်းလဲနေသောနှင့်မက်ခရိုစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနားလည်ရန်, အာရုံမှန်မှန် Zoe ရဲ့အပေါ်သုံးစွဲနေသည် အသိပညာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, စျေးကွက်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ပညာအတတ်ကို up to date ဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ ဒါကသင်တန်းဆရာအဆိုပါရောက်ရှိရန်ကူညီကြမည် အမြော်အမြင်နှင့်မစ်ရှင် Zoe အားဖြင့်အထဲကတင်ကြ၏။
အလွန်အမင်းသက်ရောက်မှုအရည်အသွေးကိုလေ့ကျင့်ရေးပေးခွငျးအားဖွငျ့, သူတို့ရဲ့လူ့မြို့တော်မှတဆင့်အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တိုင်ပင်ဖြေရှင်းနည်းများ သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လိုအစိတ်ကြိုက် သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်ရန်.
အခွက်တဆယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကူညီပေးဖို့အပြင်သူတို့ရဲ့လူများ၏စွမ်းဆောင်မှုပိုကောင်းအောင်တံ့သော တစ်ဦးချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်။
လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အိမ်သူအိမ်သားသင်တန်းနှင့် eLearning, ပွင့်လင်းအချိန်ကာလသတ်မှတ်ရက်စွဲများအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ် အကျိုးကျေးဇူးများတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်နည်းလမ်းများ၏နံပါတ်။ အရစ္စတိုတယ်တစ်ချိန်ကပြောခဲ့သကဲ့သို့, "ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုလုပျနိုငျမတိုင်မီသင်ယူဖို့ရှိသည်အရာတို့ကို, ကြှနျုပျတို့သူတို့ကိုလုပ်နေသဖြင့်သင်ယူကြသည်။ "
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, ယေဘုယျအားဖြင့်အကူအညီနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးဟောပြောသည်။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးအဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။